admin, Author at ALANZAYAR - Page 218 of 228
မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရင်းနဲ့ သားလိမ္မာလေးမင်းသန့်ကို ကိတ်မုန့်ခွံ့ကျွေးပြီး သူမကိုအာဘွားပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ မေသန်းနုရဲ့ဗီဒီယိုလေး
မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရင်းနဲ့ သားလိမ္မာလေးမင်းသန့်ကို ကိတ်မုန့်ခွံ့ကျွေးပြီး သူမကိုအာဘွားပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ မေသန်းနုရဲ့ဗီဒီယိုလေး ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးကြီး မေသန်းနုကတော့ အခုချိန်အထိတိုင်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုပြီး လှသွေးကြွယ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျက်သရေရှိတဲ့အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မေသန်းနုက လက်ရှိမှာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေလုပ်ကိုင်ပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မေသန်းနုက သူမအပေါ်မှာ […]
ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရရှာတဲ့မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုပြောပြရင်း မျက်ရည်မဆည်နိုင်တော့ဘဲငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်ရဲ့ဗီဒီယို
ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရရှာတဲ့မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုပြောပြရင်း မျက်ရည်မဆည်နိုင်တော့ဘဲငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်ရဲ့ဗီဒီယို ဇာတ်မင်းသားဖိုးချစ်ကတော့ ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိလူအများကကြိုက်နှစ်သက်အားပေးနေကြဆဲဖြစ်ကာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စကားကိုချိုသာစွာနဲ့အေးဆေးစွာပြောဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းလည်းအလွန်ရှိတဲ့ ဖိုးချစ်ကတော့ အောက်ခြေဘဝကစတင်ကြိုးစားခဲ့သူမို့ ပရိသတ်တွေစံထားရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုးချစ်ကတော့ မိဘနှစ်ပါးအပြင် မွေးစားမိဘတွေရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုကြောင့် ယနေ့အချိန်မှာ အောင်မြင်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဇာတ်မင်းသားချောလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့လေးကတော့ အမေများနေ့လေးပဲဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေကိုယ်စီက […]
မြင်သူတိုင်းရင်ဖိုစရာကောင်းလောက်အောင် ရွှေရင်အစုံပေါ်လွင်လွနေတဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးများ
မြင်သူတိုင်းရင်ဖိုစရာကောင်းလောက်အောင် ရွှေရင်အစုံပေါ်လွင်လွနေတဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးများ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လော […]
လက်မထပ်ခင်အတူတကွနေထိုင်မှုကိုဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ခေတ်လူငယ်လေးများအတွက် ( စိတ်ဓါတ်ကောင်းလေးမွေးမြူနိုင်ကြပါစေ )
လက်မထပ်ခင်အတူတကွနေထိုင်မှုကိုဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ခေတ်လူငယ်လေးများအတွက် ( စိတ်ဓါတ်ကောင်းလေးမွေးမြူနိုင်ကြပါစေ ) ” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ ” …. ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီး တစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့ လအန ည်းငယ်အကြာ……။ဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး ” …. ဒီလိုပါပဲကွာ […]
ချောက်ကမ်းပါးအစွန်းကို မေးတင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရွန်ဒါမြို့လေး
ချောက်ကမ်းပါးအစွန်းကို မေးတင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရွန်ဒါမြို့လေး ရွန်ဒါအမည်ရ မြို့ငယ်လေးကတော့ စပိန်နိုင်ငံ၊ မာလာဂါပြည်နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၂၄၂၄)ပေအမြင့်မှာ တည်ရှိပြီး၊ နက်ရှိုင်းတဲ့ လျှိုကြီးကို မေးတင်အနေအထားနဲ့ တည်ရှိပါတယ်။ မြို့နေလူဦးရေမှာ (၃၄၀၀၀)ဝန်းကျင်သာ ရှိပေမယ့် ဒီမြို့လေးဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ မျက်စိကျစရာ နေရာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ မာလာဂါမြို့နဲ့ (၆၅)မိုင်သာ […]
အမိုက်စားအနီရောင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ကောက်ကြောင်းအလှတွေ အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ နန်းမွေစံ…
အမိုက်စားအနီရောင်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ကောက်ကြောင်းအလှတွေ အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ နန်းမွေစံ… မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံကတော့ လက်ရှိ မှာ ပရိသတ်တွေ ကြားရေပန်းစားလျက် ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူေ လး ပြဲ ဖစ် ပါတယ်။…. အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူမကတော့ […]
တမူထူးခြားတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ နန်းမွေစံ အမိုက်စားရဲ့ဗီဒီယိုလေး
တမူထူးခြားတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ နန်းမွေစံ အမိုက်စားရဲ့ဗီဒီယိုလေး ပရိသတ်ကြီးရေ…… ပြည့်တင်းလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားကြောင့် ပုရိသတွေအသည်းစွဲဖြစ်နေရတဲ့ မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ ဆရာဝန်ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ဆ ရာ ၀န် အလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်ကာ ဆက်ဆီmodelတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမွေစံဟာ သူမရဲ့ထိမိလှတဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို social networkမှာ တင်ေ ပးေ လ့ရှိတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေသတိထားမိလာခဲ့ပြီး အားပေးဝန်းရံမှုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ […]
ချစ်ဇနီး(၂၇)ဦးနဲ့အတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီး၊ သားသမီး (၁၅၀)ဦးအထိ ရယူထားတဲ့အဖိုးအို
ချစ်ဇနီး(၂၇)ဦးနဲ့အတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီး၊ သားသမီး (၁၅၀)ဦးအထိ ရယူထားတဲ့အဖိုးအို… ကမ္ဘာ့မယားအများဆုံးခင်ပွန်းတစ်ဦး သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ကလေးအများဆုံးမိသားစုတစ်ခုရဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Winston Blackmore အကြောင်းကို စာဖတ်သူကြီး တီးမိခေါက်မိရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ သူဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ Blackmore , British Columbia မှာနေထိုင်တဲ့ သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ တရားဝင်မယား (၂၇)ယောက်အထိရှိကာ သားသမီး […]
သူမဆီကငွေချေးပြီးပြန်မဆပ်ဘဲ မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ကာ ဆာဂျရီလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
သူမဆီကငွေချေးပြီးပြန်မဆပ်ဘဲ မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ကာ ဆာဂျရီလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း… အသက် (၁၃) နှစ်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းက အခုဆိုရင် အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် အပျိုကြီးမမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။… အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ အခုအရွယ်ထိတိုင် အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ကိုကိုမောင်မောင်တွေကြားမှာ မအေးသောင်းရယ်လို့ […]
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ လှလွန်းနေတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ လှလွန်းနေတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social med[…]
« 1 … 217 218 219 … 228 »